Pictographs - litera sinoa toy ny sary
Fiteny Karazan'ny Shinoa
Ny sokajy fanabeazana fototra indrindra
Ny fahatsapana mahazatra mikasika ny literatiora sinoa dia sary. Nihaona tamin'ny olona maro aho izay tsy nianatra ny Sinoa izay mihevitra fa ny rafitra fanoratana dia miasa toy ny reboana izay ahitana sary mampiseho hevitra sy dikany dia mifandray amin'ny alalan'ny lisitra sary maro mifanaraka.
Marina ny marina, misy karazana Shinoa maromaro izay voasarika tsy hijery ny tontolo izao; Ireo no antsoina hoe pictographs.
Ny antony lazaiko fa fahadisoam-panantenana dia ireo tarehimarika ireo dia manangona ampahany kely amin'ny tarehimarika marobe (mety ho kely ny 5%).
Satria izy ireo dia tena tsotra sy mora takarina, ny mpampianatra sasany dia manome ny mpianatra ny fahatsapana diso fa izany no fomba amam-pahaizana tsotra, izay tsy marina. Izany dia mahatonga ny Shinoa ho mora kokoa, fa ny fomba fianarana na fampianarana enti-mody amin'izany dia voafetra. Ho an'ny hafa, fomba mahazatra kokoa amin'ny famolavolana tarehintsoratra sinoa, vakio ity lahatsoratra ity.
Na izany aza dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba fiasan'ny mpanao pikantsary satria izy ireo no karazana karazan-tarehimarika sinoa ary matetika izy ireo no mifandray. Ny mianatra pictographs dia mora mora raha fantatrao ny zavatra asehony.
Mampiseho ny zava-misy marina
Ny pictographs dia sary nalaina tany amin'ny tontolo voajanahary. Nandritra ny taonjato maro, ny sasany tamin'ireo sary ireo dia nanjavona tsy nahazo fankatoavana, fa ny sasany dia mbola mazava.
月 = volana (yuè)
= tendrombohitra (shan)
木 = hazo (mù)
Raha toa ka sarotra ny maminavina hoe inona no dikan'ireo karazan'olona ireo amin'ny voalohany raha hitanao izy ireo, sarotra ny mamantatra ireo zavatra voasaina rehefa fantatrao hoe iza izy ireo. Izany dia mahatonga azy ireo ho mora kokoa hahatsiaro.
Raha te hahatsikaritra ny fomba nipoiran'ny sary sasantsasany, azafady mba jereo ny sary eto.
Ny maha-zava-dehibe ny fahalalana pictographs
Na dia marina aza fa ny ampahany bitika amin'ny sainan'ny Shinoa ihany no pictographs, tsy midika izany fa tsy manan-danja izy ireo. Voalohany, izy ireo dia mampiseho hevitra tena fototra izay ilain'ny mpianatra mialoha. Tsy voatery ho ireo karazan'olona mahazatra indrindra ireo (izay matetika no mitovitovy amin'ny natiora), saingy mbola mahazatra izy ireo.
Faharoa, ary ny tena zava-dehibe, ny pictographs dia mahazatra ho singa amin'ny endri-tsoratra hafa. Raha te hianatra hamaky sy hanoratra sinoa ianao, dia mila mamaky tarehimarika ianao ary mahatakatra ny rafitra sy ny fitaovana.
Mba hanomezana ohatra vitsivitsy anao, ny tarehimarika 口 (kǒu) dia "boka" hita amin'ny tarehintsoratra an-jatony mifandraika amin'ny teny na feon-javatra isan-karazany! Tsy fantany hoe inona no dikan'io toetra io raha toa ka sarotra kokoa ny mianatra azy ireo. Tahaka izany koa, ny karazana 木 (mù) "hazo" etsy ambony dia ampiasaina amin'ny tarehintsoratra izay mampiseho ireo zavamaniry sy hazo, ka raha mahita an'io toetra io ianao ao amin'ny fitambarana eo akaikin'ny (matetika eo ankavia) amin'ny endrika tsy mbola hitanao teo aloha dia afaka Mahaiza matoky fa zavamaniry misy azy io.
Mba hahazoana sarimihetsika feno momba ny fomba fiasan'ny mpilalao Shinoa, na dia tsy ampy aza ny pictographs, dia mila mahatakatra ny fomba fampifandraisana azy ireo amin'ny fomba samihafa:
Karazana karazana efatra karazana
Karazana karazana 1: Pictographs (ity lahatsoratra ity)
Toetran'ny karazan'olona 2: Fomba fisainana tsotra
Karazana karazana 3: Ideographes mifangaro
Karazana endri-tsoratra 4: Fangon'ny semantika-fonetika
Mianatra ny sakana fanorenan'ny sarimihetsika Shinoa
Mianatra ny fotokevitra: ireo karazana Shinoa
Da - "lehibe" - sarimihetsika Shinoa
Sariitatra Shinoa ho an'ny "Havia"
Ny mariky ny trondro amin'ny teny Shinoa
Mianara miteny sy hanoratra "izaho" amin'ny teny sinoa
Tolo-dalàna momba ny fanoratana ireo endri-tsoratra Sinoa
Ny maha-zava-dehibe ny famelezana ireo karazana Shinoa
Ahoana no hitenenanao sy soratanao "ianao" amin'ny teny sinoa
Torohevitra momba ny fomba hamakiana ny teny sinoa
Inona no dikan'ny andian-tsarin'ny karazana Shinoa 日 (rì)
Renaissance Music Timeline
Nahoana ny Mpitarika sy ny Sampan-draharaha no tokony hampivoatra izany?
Fanabeazana momba ny Washburn University
Fandrakofam-pahaizana digestive: Fanondrahana voajanahary
Ny tantaran'ny Ronin 47
Fanaovana jono ho an'ny mpamosavy ao amin'ny Fianakaviana
Fanambarana lehibe sy zon'ireo zon'olombelona sivily
Mifandray amin'ny anjelin'ny mpiambina anao: mametraha fanontaniana
Ny famelana ny fanala amin'ny gulf
Ny feo 44 amin'ny fiteny anglisy
Malagasy definition sy Ohatra
Ny alitara Taoista
Tantarany: Osama bin Laden
Vita ny kodiarana: polisy
Boky Top Momba ny Hindoisma
Word of the Day - moto
Ahoana ny fomba fampiasana fiakaran-daka
7 Zava-dehibe momba ny New Amsterdam
Mitovy amin'ny Results WrestleMania
Fanakatonana fahatarana (famaritana ny sazy)
Ny fandresen'i Phil Mickelson tamin'ny fifaninanana lehibe
Nanazava ny fampisehoana maimaim-poana ny Formula 1
Famakafakana ny 'fomba fitenenana amin'ny mpihaza iray' nataon'i Pam Houston
Fomba fialan-tsasatra tsotra ho an'ny mpianatra mpianatra